Pabrikan-damba vita amin'ny akora vita amin'ny akrilika mora vidy sy mpamatsy | Chengyang
Lamba fibre-vera vita amin'ny akrilika dia lamba vita amin'ny fiberglass vita amin'ny lanjan'ny lanjany, weaveset vita amin'ny akrilika vita amin'ny avo mba hampihenana ny porosity vita amin'ny lamba ary manampy amin'ny fanjairana sy ny zaitra. Natao ho an'ny mpanamboatra lamba firakotra, lamba firakotra ary karazana afo hafa izy io
Vidin'ny FOB: USD 2-15 / sqm
Min.Order Quantity: 100 sqm
Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic dia lamba antonony lanja vita amin'ny fiberglass, acrylic weaveset vita farany-avo mba hampihenana ny porosity lamba ary manampy slitting sy zaitra. Natao ho an'ny mpanamboatra lamba firakotra, fonosana insulation ary karazana rafitra fanaraha-maso afo hafa.
Fiberglass lamba + akrilika lakaoly
Mavo, mavo, mainty
1) Fanoherana afo
2) Maripana ambony
3) Fabrication mora
4) malefaka sy malefaka
lamba firakotra mandeha amin'ny herinaratra, fantsom-pamonoana afo, vokatra azo avy amin'ny hafanana, tanany vita amin'ny hafanana azo esorina sns
Fiberglass mifono akrilika Horonan-damba vita anaty baoritra feno fonosana na apetaka amin'ny takin'ny mpanjifa.
Previous: Fiberglass mifono akrilika
Manaraka: Lamba fitaratra mifono Ptfe
A1: Izahay no mpanamboatra.
F2: Inona ny vidiny manokana?
A2: Azo ifampiraharahana ny vidiny, azo ovaina arakaraka ny habetsany na ny fonosanao.
Rehefa manontany ianao dia ampahafantaro anay ny habetsaky ny isa sy ny modely tianao.
F3: Manolotra ohatra ianao?
A3: Maimaimpoana ny santionany nefa nangonina ny vidin'ny rivotra.
F4: Inona ny ora fanaterana?
A4: Araka ny habetsahan'ny lamina, mahazatra 3-10 andro aorian'ny fametrahana.
F5: Inona ny MOQ?
A5: Araka ny vokatra tianao, matetika 100 sqm.
F6: Inona ny teny fandoavam-bola ekenao?
A6: (1) 30% mialoha, mandanjalanja 70% alohan'ny hametrahana (FOB teny)
(2) 30% mialoha, mandanjalanja 70% amin'ny kopia B / L (teny CFR)
6mm matevina Fiberglass lamba lamba
Fiberglass lamba 3m
Clot Fiberglass, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Fiberglass mifono akrilika, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy,